Mpanamboatra sy mpamatsy kojakoja fanitarana sehatr'asa miasa any Sina | Famoronana Bocheng
Sakanana U sy sakana L
manaraka ny habeny dia tahiry
Afaka manamboatra latabatra misy habe samihafa izahay arakaraka ny takinao
Amin'ny maha-singa lehibe indrindra amin'ny latabatra welding 3D, ny blokche U sy ny block L dia mitana andraikitra lehibe amin'ny asanao welding, azon'izy ireo atao ny manitatra ny sehatry ny asa amin'ny latabatra fantsonao.
Manana lavaka mitovy habe sy lavitry ny lavaka mitovy amin'ny latabatra welding 3D izy ireo, ary azo ampiasaina amin'ny kojakoja hafa amin'ny latabatra.
Endri-javatra: • Ampiasao: 5-lafiny • ho fampifandraisana latabatra amin'ny fampifandraisana latabatra 3D maro • fanitarana ny axis fahatelo ho toy ny tilikambo fametahana na ho toy ny mpikaroka latabatra eo an-dohany • Fifandraisana amin'ireo singa ao amin'ny rafitra
Ireto no asan'ireto sehatra efatra miasa amin'ny zoro L spacer ireto: • Manitatra ny halavan'ny latabatra fiasana ary manamora ny fanamboarana sy ny fametahana ireo sanganasa. • Mampifandray latabatra roa na mihoatra ny roa. • Ampiasaina mba hahitana sombin-javatra sy kojakoja fanohanana amin'ny fametahana lasitra.
Ny clamping sy ny toeran'ny zoro dia ampiasaina mba hanohanana ny workpiece amin'ny zoro ankavanana. Izy io dia azo apetraka eo amin'ny tampony ambony na amin'ny lafiny efatra amin'ny fametahana mba hanitarana ny halavan'ny latabatra fiasana. Ankoatry ny fisehoana tsara, ny faharetana avo lenta, ny vy zoro manohana dia afaka misoroka ny fantson-drano ary sarotra ny mamadika azy. Ny fanohanana ny angle iron dia azo ampiasaina hahitana ny sangan'asa, hanitatra ny latabatra fiasana ary ny kojakoja fanampiana.
Fampiharana: Ity clamping sy ny toerana misy ny zoro kianja ity dia mampiharihary fahafaha-manao clamping marobe noho ny lafiny telo. Natao manokana hampiasaina amin'ny faritra mavesatra izy io. Izy io dia ampiasaina amin'ny famaranana fetra sy ny fanitarana latabatra. Ny fitaovan'ny vy vy HT300 dia mahatanteraka ny fahamarinan-toerana avo indrindra ho an'ity kianja fikolokoloana sy fitadiavana zoro ity.
• Misy lavaka mampifandray mahazatra amin'ny sisiny.
• fanitarana latabatra diagonal
• fampiasana malefaka ho V-block. mpanohana sy mpikaroka sns.
• Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny singa mifamadika ho an'ny fanitarana ny latabatra sy ny kesika goba.
• Ny savaivan'ny fantsom-boaloboka (latsaky ny Φ200) dia azo ampiasaina ho toy ny Vatombahana toerana miendrika V.
Teo aloha: latabatra welding kojakoja hafa
Manaraka: fitaovana fandrefesana vy